Shir ku saabsan arrimaha BBI oo ka billowday maxkamadda ugu sarreysa wadanka | Star FM
Home Wararka Kenya Shir ku saabsan arrimaha BBI oo ka billowday maxkamadda ugu sarreysa...
Shir ku saabsan arrimaha BBI oo ka billowday maxkamadda ugu sarreysa wadanka
Garsoorayaasha ka howlgalo maxkamadda racfaanka ee dalka ayaa waxaa u socdo kulan ku aaddan qaabka ay u maareyn karaan dacwado dhowr ah oo loo gudbiyay.
Shirka oo furmay abaare 9-kii subaxnimo ee maanta ayaa waxaa guddoominaya saddex ka mid ah xaakinnada maxkamadda.
Waxaa lagu qabanayaa xarunta dhexe ee maxkamadda ugu sarreysa Kenya ee Supreme Court.
Waxaa dacwado racfaan ah garsoorayaasha hor dhigay xeer ilaaliyaha qaranka Paul Kihara Kariuki m madaxa xisbiga ODM Raila Odinga,xoghaynta BBI sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka ee IEBC.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo ka hadashay Xiriirka kala dhexeeya Dalka Jabuuti
Next articleWasiirada Maamulka Jubaland oo la Ansixiyay